Jabhadda OLA oo culeyska ku kordhisay Xukuumadda Addis Ababa | Dhacdo
Home Wararka Maanta Jabhadda OLA oo culeyska ku kordhisay Xukuumadda Addis Ababa
Jabhadda OLA oo culeyska ku kordhisay Xukuumadda Addis Ababa
Jabhadda Xoreynta Oromada (OLA) ayaa dhawaan sheegtay inay la midowday Jabhadda Gobolka Tigrayga ee TPLF, oo dagaal kula jirta Dowladda Federaalka Itoobiya.
Labaduba waxay sheegeen inay isku bahaysanayaan, oo ay iska kaashanayaan, sidii ay xukunka kaga tuuri lahaayeen Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed.
Faysal Cabdi Rooble oo fallanqeeya arrimaha Geeska Afrika ayaa sheegay in wax kale oo ka dhaxeeya aanu jirin TPLF iyo OLA, aan ka ahayn inay ridaan xukuumadda uu hoggaamiyo Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed iyo Xisbigiisa PP (Prosperity Party).
“Waxay isku ujeeddo ka yihiin in ay bedelaan xukuumadda hadda jirta ee Abiy Ahmed madaxda ka yahay iyo Xisbigiisa PP. Wax hadalo oo aad u cadcad ama bartilmaameed buuxa oo dhameystiran weli kuma aanay heshiin, laakiin waxay ku wada heshiiyeen inay dagaalka wada galaan, inay dowladda ridaan, inay markaa wadatashi loo dhan yahay oo labadoodu hormuud ka yihiin leeskugu yeero dadka arrimahaasi saluugsan oo dhan.” Ayuu yiri Faysal Cabdi Rooble oo BBC la hadlay.
Faysal Cabdi waxa uu ku waramaya in jabhadahan ay kubaareen karaan, oo ay ciriirin karaan Xukuumadda Addis Ababa.
“Culeys aad u badan bay ku keeni karaan. (Kow) fekerkii ahaa Tigray oo keliya ayaa la dagaalamaya dowladda, taasi meesha bay ka baxeysaa, xoogga dadkii ugu tirada badnaa Oromo ayaa yimid dagaalka. (Labo) Magaalada Addis Ababa lagu leeyahay waxa inta badan ku wareegsan dadka qowmiyadda Oromia, haddii markaa ay ayagu gacan siiyaan sida hadda u ektahayna inay gacan siinayaan Xoogaga Tigrayga, labadii xoog ee midna ugu tirada badnaa, Addis Ababa-na hoygeedu ahayd, midna cududda xoogga militariga uu lahaa na tuseen illaa hadda, haddii labadaas ay isugu taggeen dowladdii waxaad mooddaa in ciriiri ay gelinayaan aagga Addis Ababa.” Ayuu yiri Faysal Cabdi.
Rooble ayaa qaba in xaaladda hadda ka taagan dalkaasi ay wiiqday rajadii ahayd in wada hadal lagu dhameeyo colaadda ka taagan dalkaasi, waana xilli TPLF ay sheegtay in la dhaafay jadwalkii wada hadalada.
Dardargelinta TPLF ay ku sameysay dagaalka iyo baaqii Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed ee ahaa in dadku is difaacaan ayaa hadalhayn badan ka abuurtay dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika.
Previous articleHawlgal guryaha lagu baarayo oo laga bilaabayo Addis Ababa
Next articleMacluumaad la xiriira diyaaradda ku burburtay Garoonka Doolow